About us - Xiamen Kinghow yangaphandle Product Co., Ltd.
I-KingHow ukusukela ngo-2005
Njengomvelisi weebhegi, sivelisa uluhlu olupheleleyo lweengxowa ngaphezulu kweminyaka eli-15. Ngemigangatho yethu ekumgangatho ophezulu kunye nenkonzo yabathengi, besisebenzisana nabathengi bethu ukwenza ezona mveliso zithunyiweyo zibalaseleyo.
Siyawaxabisa abathengi bethu kwihlabathi liphela, abasenzele impumelelo kwaye sihamba iminyaka emininzi kangaka kolu shishino. Into ekufuneka siyenzile kukugcina ukubonelela ngomgangatho ophezulu kunye nexabiso elifanelekileyo kubathengi bethu ukuze babenze baphumelele. Wamkele umthengi ngakumbi nangakumbi ukuze unxibelelane kwaye wakhe ubudlelwane bexesha elide.
Iindawo zethu eziphambili zemveliso zibandakanya oobhaka, iingxowa ze-duffel, iingxowa zezixhobo, iibhegi zeetote, ipakethe yesinqe, iingxowa zesikolo kunye nezinye ezisebenza ngaphandle, umthambo wezemidlalo, ukuhamba, ukubuyela esikolweni, izixhobo zezixhobo, ilaptop yedijithali kunye nenjongo yokuthengisa. Sikwaphethe urhwebo olubanzi lweemveliso ezixhumeneyo ngokusekwe kubutyebi bethu, njengentente yenkampu, iminqwazi kunye neminqwazi, isambrela kunye ne-raincoat, impahla, imfakamfele kunye nokunye.
Kubathengi bethu, sithembisa oku kulandelayo
● ukuzibophelela kwethu kumgangatho ongenakuthelekiswa nanto kunye nentembeko
● elona xabiso lethu lisemgangathweni, nokuba yeyethu imveliso okanye yeyokuthengisa ngaphandle
● iimveliso ezikumgangatho ophezulu ezihambelana neenkcukacha zakho
● ukuhanjiswa ngexesha kunye nokubonelela ngesisombululo esihle sokuhambisa ngesalathiso
Siyi-turnkey yakho isisombululo. Ndwendwela iphepha lokunxibelelana Ukufowuna, ukuthumela i-imeyile, kwaye uqalise nathi namhlanje.